Majladda Time - Gpedia, Your Encyclopedia
Gerbedkii ugu horreeyey Shantiriska Time, 1923 dii
Time (Af-Soomaali Taaym), oo sumaddeeda ganacsigu tahay TIME oo far-taagan ah (Waawayn), waa Shantiris (Majalad) todobaadle ah oo ka soo baxda waddankaMaraykanka. Waxay wada jaal yihiin dhiggeedda tifaaftirka Yurub Time Europe (Af-Soomaali Taaym Yurub) oo Landhan ka soo baxda, iyo TIme Asia (Af-Somaali Taaym Eeshiya) oo Hong Kong ka soo baxda.
Time, caddadkeedii ugu horreeyey wuxuu soo baxay sanadkii Maarso 3, 1923, waxaana soo saaray Briton Hadden iyo Henry Luce, waxayna noqotay Shantiriskii ugu horreeyey ee todobaadle ah ee ka soo baxa waddanka Maraykanka. Time waxaa looga hadlaa dadka caanka ah iyo waxyaalaha la xiriira, sida, 100 ka qof ee adduunka loogu jecel yahay, loogu necebyahay, ugu geesisan, uga dhiirran, iwm.
Waxaa la sheegaa in magaca TIME uu yahay ereyo laga soo gaabiyey "The International Magazine of Events." oo la cno ah "Shantiriska Caalamiga ah ee Dhacdooyinka"
Waqtigaan la joogo, tifaaftiraha Time waa Richard Stengel; Priscilla Painton, Adi Ignatius iyo Michael Elliottna waa u qaybsanaaysha maamulka shantiriska.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Majladda_Time&oldid=143511"